Qaab isku duro, wax taaj oo kale duro, Kan sameeyey Qaab caaga Shiinaha
Aasaasay sannadkii 2005, HKY Qaab waa mid ka mid ah soo saarayaasha caaryada duritaanka ugu tartan iyo shirkadaha wax taaj oo kale duro ee Shenzhen, Shiinaha. Annagu waxaannu u adeegi tiro balaadhan oo ah warshadaha oo ay ku jiraan gudaha baabuurta, nidaamka qaboojinta baabuurta, qalabka korontada, codsiyada guriga, caafimaadka, tamarta, warshadaha iyo ka badan.
Bixi caaryada irbado iyo Durid adeegyada wax taaj oo kale
caaryada HKY, shirkadda duritaanka Chian caaryada ah, waxaad bixisaa xalka ugu fiican waayo, caadadii duritaanka doorsoon qaybo iyo wasakhahaasi
caaryada iyo wax taaj oo kale shirkadaha Professional Shiinaha duritaanka caadada la IATF-16949 shahaado iyo maamulka ERP nidaamyada
Waxaan kaliya ma ahan sameeyo wasakhahaasi iyo qaybo ka mid doorsoon kuu, laakiin sidoo kale ku siin karaan qaybo ka design, dahaadhay, rinjiyeynta, daabacaadda shaashadda iyo adeegyada kale ee la xidhiidha wax soo saarka.
Waxaa naga go'an in ay hubiso tayada iyo ku qanacsanaanta of macaamiisheena iyo hubinta ku qanacsan tahay.
miyaad taqaan taas oo xal
ku haboon aad neesd ganacsi
CONTACT OUR MASHRUUCA aqoonyahanada
DOORO ADEEGGA SAMAYNTA A
In mashaariic badan, marka lagu daro qaybaha caaga ah, waxaa jira qaybo ka mid daawaha, sida our daawaha aluminium caadi ah, waxaaga zinc, waxaaga titanium, qaybo daawaha kuwaas oo sidoo kale u baahan in la doorsoon. Si loo helo macaamiisha adeegga wanaagsan, waxaan aasaasay koox xirfadeed dhinta-shubay dhiman ee 2015. Hadda, waxaan ku ururtay waayo-aragnimo qani ah si loo daboolo baahida macaamiisha ugu badan.
Waxaan ku hormartay mashiinada wax taaj oo kale duray caag oo sano oo khibrad ah ee kooxda wax taaj oo kale duray warshadaha, 2 QC farsamo halkii wareeg. Waxaan sidoo kale soo diri Dufcaddii ugu horeysay ee saamiyo si macaamiisha ah loo baaro. QC oo tijaabo u ah baarka ka dhex CMM, borojektar, 2DMI, altimeter, eeg block, irbad eeg, L-square, caliper, micrometer, engegnaantaada iyo qalabka kale ee imtixaanka. U dir warbixino tayo leh si ay macaamiisha loogu talagalay kormeerka, sida Marco Tardelli, SPC, CPK, iwm shaqada aan ka dhigi All waxaa kaliya loogu talagalay oo tayo sare leh caadadii Chinese wax taaj oo kale duray.
HKY Qaab leeyahay waayo-aragnimo ballaaran ee wasakhahaasi double duro midabka leh nidaamka qoqobada, kaas oo u ogolaanaya doorashada saxda ah ee noocyada wax soo saarka iyo goobaha iridda, samaynta xidhiidhka ka mid ah laba ka fudud oo ka sax ah midabo. Waxaa intaa dheer, sida ay shuruudaha macaamiisha, waxaan sidoo kale ku siin kara adeeg wax taaj oo caag sare.
A si fiican loo qorsheeyay oo sax macmalay caaryada fure u tahay wax soo saarka ee hufan ee qaybo ka mid caag wanaagsan. kooxda HKY uu leeyahay waayo-aragnimada hodanka ah oo ku saabsan naqshadaynta qiray in caaryada, wax soo saarka ka sano oo dhan waxbarasho, taas oo noo oggolaan in ay u adeegaan macaamiisha our dhismaha wasakhahaasi qaybo in qaab adag oo looga baahan yahay cabbir dhagan.
WAA MAXAY SABABTA AAN RABO Qaab HKY
√ nala, waxaad badbaadin kartaa waqti iyo lacag. Waxaan nahay warshad, in ay nala shaqeeyaan ilaalin kartaa guddiga ganacsade ah
√ kooxda Our injineernimada leeyahay waayo-aragnimo ballaaran warshadaha iyo xirfadaha maamulka mashruuca, iyo sidoo kale English ah oo hufan isgaarsiinta farsamo wanaagsan.
√ Si buuxda u la kulmo heerarka tayada aad, dhammaan qaybaha caaryada for wasakhahaasi dhoofinta waxaa la soo saaray iyadoo la raacayo DME, heerarka HASCO, sida musmaarradii guide, bushings, thimbles ama sida ay shuruudaha macaamiisha.
√ saxiixaysaa heshiiska shaacin la'aanta (Heshiiska Non-Daah) si ay u ilaaliyaan macluumaadka mashruuca iyo aan marnaba la qayb kasta ee kale la wadaagi doontaa macluumaadka aad.
√ DFM (design for manufacturability) falanqaynta ee qayb kasta oo ka mid ah aqoonsiga arrimaha khatarta ka iman karta (design qayb iyo dhibaatooyinka caaryada) ka hor habee design iyo warshadaha
√ Sida ay sawiro 2D macaamiisha ah ee, oo dhan wasakhahaasi waxaa weheliya shahaado steel, shahaado daaweynta kulaylka, oo xuduudaheedu imtixaanka caaryada iyo warbixin cabbirka-buuxa.
√ Waxaan leenahay ka badan 20 sano waayo-aragnimo ah oo ku saabsan design caaryada, samaynta caaryada duritaanka, caaryada Laba-color, ku dhinta Casting, Warshadaha wax taaj oo kale duritaanka
√ Had iyo warcelin macaamiishayada hab wakhti iyo xiriiraan sida ugu dhakhsaha badan ee qeybiyeyaasha degaanka
√ ayaa wada shaqeyn la leh macaamiisha badan oo ku saabsan mashruuca caaryada duritaanka ah, kaas oo mashquulin in warshado kala duwan sida Automotive, Aerospace, Makiinado, Qalab, Electronics, Baako, Makiinado, iwm
Plastic Injection, Duritaanka Qaab caaga, Mold For Plastic Injection, Plastic Injection Bottle Cap Mold,